Kukumbira hupenyu hwebasa: yemahara foni: maitiro ekuzviita nhanho nhanho | Ehupfumi Zvemari
Chitupa cheupenyu hwebasa, kana kungoshanda hupenyu, igwaro rinoratidza nguva yakashanda munhu, ndiko kuti, vakanyoreswa kuSocial Security uye, nekudaro, vakabatsira. Ichi chakakosha ruzivo kuti uzive kana mushandi ane kodzero, semuenzaniso, kune yekushaya basa mabhenefiti, mudyandigere, nezvimwe. Kunyorera mahara uye ivo vanotipa isu sarudzo dzakasiyana kubva kumeso-kumeso-mamiriro, online, kukumbira hupenyu hwebasa nefoni yemahara ...
Ndiyo yekupedzisira iyo yatiri kuda kutaura newe nezve pazasi sezvo asiri munhu wese anogona kuve neInternet kana ane nguva yekuenda kumeso-kumeso kusangana neSocial Security. Saka, kana iwe uchida kuziva maitiro ekukumbira hupenyu hwebasa nefoni yemahara, pano tinokuudza zvaunofanira kuita.
1 Chii chiri kushanda hupenyu
1.1 Chii chiri kushandira hupenyu
2 Nzira dzekukumbira hupenyu hwebasa
3 Kumbira hupenyu hwebasa: yemahara foni
3.1 Kumbira hupenyu hwebasa nefoni yemahara: Fona nefoni
3.2 Kumbira hupenyu hwebasa nefoni yemahara: Sarudza sarudzo 4
3.3 Sarudza mhando yehupenyu hwebasa
3.4 Mirira mushumo
Chii chiri kushanda hupenyu
Hupenyu hwekushanda, unonziwo chitupa cheupenyu hwebasa kana chitupa chehupenyu hwebasa, igwaro repamutemo, rakapihwa neSocial Security Treasure, panogadzirwa zvese zvine chekuita nenyaya yebasa, kureva zvibvumirano (kunyoreswa uye kugumiswa), hurema, kushaya mabasa, mamiriro akafananidzwa pakuburitswa ... kwemunhu.
Gwaro iri nderega, uye muridzi chete ndiye anogona kurikumbira sezvo riine ruzivo rwakavanzika uye rwakasarudzika nezve iye munhu.
Chii chiri kushandira hupenyu
Hupenyu hwekushanda igwaro rine mashandisiro akawanda. Muchokwadi, kunyangwe chinhu chakajairika ndechekuti inoshandiswa kuziva kana kambani yakanyoresa mushandi, kana kubvunza nguva yezvipo iyo munhu iyeye zvine chekuita neSocial Security, chokwadi ndechekuti inoshanda zvakanyanya.
Kuti uverenge kana uchikwanisa kutora kubatsirwa kwekushaya basa, kana kusashanda, kunyanya. Uye zvinodikanwa shoma nguva yemupiro kuti uwane izvi.
Kuverenga kana iwe uchikodzera kuwana pension pension.
Kuona kuti kambani yakunyoresa neSocial Security.
Kugadzirisa chero zororo rinogona kudikanwa (kuremara kwenguva pfupi, kubereka, kubereka ...).
Kuona kuti Social Security yakaverengerwa pahupenyu hwese hwekushanda hwakaitwa nemushandi. Zvikasadaro, iwe unogona kukumbira, mukunyora, uye uchipa zvese zvinogoneka dhata, kuiswa kweayo mabasa asina kutarisirwa (kungave nekuti vakura, nekuti kambani haina kunyoresa ...).
Nzira dzekukumbira hupenyu hwebasa
Kunyangwe isu tichida kutarisisa pakukudzidzisa iwe maitiro ekunyorera kwehupenyu hunoshanda nefoni yemahara, isu hatigone kudzivisa kukusiira iwe dzimwe sarudzo dzaunofanirwa kunyorera kwehupenyu hwekushanda. Uye ndeyekuti Social Security inokupa iwe nzira ina dzekuzviita (kuverenga nzira yerunhare). Izvi ndeizvi:
NeInternet. Iine maitiro matatu: ine mushandisi dhata uye isina chitupa chedigital; ine digiti yedhijitari kana yemagetsi DNI; kuburikidza nePIN Cl @ ve.
Iwe pachako kumahofisi eGeneral Treasury yeSocial Security.
Chimwe nechimwe chazvo chine hunhu hunofanirwa kusangana kuti uwane hupenyu hwekushanda. Muchokwadi, isu takatokurukura dzimwe dzadzo kare, saka dzinogona kushanda segwara kana sarudzo yefoni isingaenderane newe.
Kukumbira hupenyu hwebasa pamusoro pefoni yemahara zvinokwanisika, uye zvinogona kukusunungura kushushikana. Asi iwe unofanirwa kuziva kuti izvi hazvisi zvekukurumidza, ndiko kuti, zvinotora kanguva kusvika iwe uzviwane, saka kana uchichida nekukasira, chinhu chakanakisa ipapo ndechekuti uongorore sarudzo dzatakakupa kare.
Asi kana nguva isiri dambudziko, matanho aunofanira kutora kukumbira hupenyu hwebasa anotevera:
Kumbira hupenyu hwebasa nefoni yemahara: Fona nefoni
Yekutanga, uye iri pachena, kukumbira hupenyu hwebasa nefoni yemahara ndeyekufona. Kune izvi, iyo Social Security ine nhamba inogoneswa, inova 901502050. Zvino, iri 901 iyo, sekuziva kwako, haina mahara, ndosaka zvichikurudzirwa kuti, kana iwe ukafona, uzviite nenhamba yakatarwa kune izvo zvinodhura zvishoma. Zvisinei, pane imwe nzira.
Uye iwe unogona kunyorera hupenyu hwebasa nefoni pa913878381. Haisi yemahara kana, asi tichifunga kuti tine mafoni asina muganho kune nharembozha uye nhare, zvinogona kusununguka kana ukashandisa iyi yechipiri sarudzo.
Ehezve, yeuka kuti foni yefoni yekushandira vatengi maawa (kunyangwe iwe uchidana yekutanga kana yechipiri) iri kubva na9 mangwanani kusvika 7 masikati, uye inongowanikwa chete kubva Muvhuro kusvika Chishanu. Musi weMugovera, Svondo uye mazororo ivo havangakupinde.
Chimwe chinhu chinofanira kutariswa ndechekuti kukumbira hupenyu hwebasa nefoni hakusi kumatunhu ese. Semuenzaniso, muAlava, Alicante, Avila, Barcelona, ​​Córdoba, Guipúzcoa, Granada, Santa Cruz de Tenerife, Soria, Valencia neVizcaya hazvigoneke kuti uzviwane nenzira iyi.
Kumbira hupenyu hwebasa nefoni yemahara: Sarudza sarudzo 4
Kana vatora kufona, chinowanzoitika ndechekuti iwe unowana kurekodha. Ukazviteerera, iwe unozoona kuti uchafanirwa kusarudza sarudzo 3 kana 4 uye, panguva iyoyo, uchafanirwa kutaura ruzivo rwese rwavanokumbira, senge yako Social Security nhamba, ID yako kana pasipoti, kero uye kodhi yepositi. Iva nezvose zviripo kuitira kuti kufona kusarembera uye iwe unofanira kutanga kubva pakutanga.
Sarudza mhando yehupenyu hwebasa
Paunenge iwe uchinge wapa iyo data, iwe uchafanirwa kusarudza kuti ndeupi rudzi rwebasa rehupenyu mushumo iwe waunoda. Semuenzaniso, unogona kusarudza yakazara, iine nhoroondo yako yese yebasa, imwe ine dheti renhamba, kana mamwe mafirita.
Iko kufona kunenge kwapera, uye ikozvino iwe uchafanirwa chete kumirira 1-2 mavhiki kuti rako rehupenyu rebasa risvike kukero yakanyoreswa neSocial Security. Izvi zvinoreva here kuti ndikapa imwe kero haisvike kwandiri? Zvakanaka, pamwe kwete.
Muchokwadi, zvinokwanisika kuti kana iwe uchipa iyo data, kana ivo vakaona kuti izvi hazvisi izvo zvavanazvo muSocial Security, ivo vanokukumbira iwe kuti ugadzirise ruzivo rwavanarwo pamusoro pako, nekuti, zvikasadaro, ivo vaizotumira mushumo ku kero iyo yavanoziva.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ehupfumi Zvemari » General hupfumi » Basa » Kumbira hupenyu hwebasa: yemahara foni
Chitupa chekuda kwekupedzisira